musha / Ultraudio Frequency Series / Ultraudio Frequency Induction Heating System
Category: Ultraudio Frequency Series Tags: tenga induction heat system, induction heating device, Induction Heating equipment, induction kupisa chira, Induction Heating Machine, induction heat system, induction heat system mugadziri, induction heat system mutengo, induction heat system mutengesi, superaudio induction heat system, ultrasonic frequency heat system, ultraudio frequency hita, URF induction heat system
Ultraudio frequency induction heat systems inogona kushanda nesimba re30^300KW uye frequency yayo inotangira pa10 kusvika 30KHz. Wih yayo yedhijitari dhizaini yekudzora system.Yese DW-URF yakatevedzana inogona kuratidza yekushanda voltage, ikozvino, kushanda frequency uye kuratidza kukanganisa. Yayo compact dhizaini inoita diki yekuisa nzvimbo uye inoshanduka yekushanda nharaunda inowanikwa. Senyanzvi induction kupisa muchina mugadziri, HLQ yakashandisawo yakakura uye yakavimbika IGBT dhizaini resonant dhizaini mudhizaini yedunhu reURF yakatevedzana. Kugadziriswa kweDW-URF nhepfenyuro kuri nyore uye kuri nyore. Chero ani asiri nyanzvi anoshanda anogona kuzvibata.
Uyezve, iyo inokurumidza kupisa uye yakakwirira simba maficha eDW-URF akateedzana azviitirawo imwe yeanonyanya kuchengetedza simba ekudziya nzira kana ichienzaniswa neese magetsi ekudziya masisitimu. Iwo induction jenareta eultraudio frequency induction yekudziya masisitimu anobvumira michina yeremote control masisitimu zvinoenderana nechikumbiro chevatengi chekushandisa chaiko, senge 0-10V/4-20mA simba rekudzora interface, RS485 uye RS232. Michina iyi inogonawo kushanda otomatiki pasi peiyo yekunze control system uye yakakodzera kune akasiyana maapplication senge billets kudziyisa, auto zvikamu kupisa kupisa.
Main modhi uye zvakatemwa
mhando DW-URF-30A DW-URF-30ABS DW-URF-40ABS DW-URF-50ABS DW-URF-40AB DW-URF-50AB DW-URF-60AB
maitikiro 10-40KHz 10-40KHz 10-40KHz 10-40KHz 10-40KHz 10-40KHz 10-40KHz
Kushanda voltage 342-430V
chiyamuro voltage 3phase 380V 50HZ kana 60HZ
Kuyerera kwemvura 15L / min
Shanduko inoshanduka x 25KG 26KG 28KG 38KG 50KG 60KG
Jenareta saizi (mm) xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx
Transformer size(mm) x xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx
zera xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx
uremu 79kg 92kg 95kg 99kg 176kg 185kg 195kg
mhando DW-URF-80AB DW-URF-100AB DW-URF-120AB DW-URF-160AB DW-URF-200AB DW-URF-250AB DW-URF-300AB
maitikiro 10-40KHz 10-40KHz 10-40KHz 8-30KHz 8-30KHz 8-30KHz 8-30KHz
Kuyerera kwemvura 50L / min
Shanduko inoshanduka 86KG 86KG 95KG 101KG 116KG 123KG 126KG
Transformer size(mm) xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx
zera xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx xnumxxxnumxxxnumx
zera 282kg 282kg 305kg 316kg 275kg
IGBT inversion tekinoroji yakavakirwa LC akatevedzana redunhu.
Phase yekuvhara looping tekinoroji uye nyoro switch inovimbisa kuvimbika kwakanaka, ziva simba uye frequency yekutevera otomatiki.
Diode rectifier inokonzeresa yakakwira simba chinhu kupfuura 0.95
Kushanda kuenderera ne100% basa kutenderera, simba rinogona kuvhurwa ipapo kana kuvharwa.
Yakakwana inodzivirira yedunhu uye kutonhora sisitimu dhizaini, iyo inovimbisa kuvimbika kwakanaka kwemuchina.
Simba rekushandisa rakaderera: rinoshandura kusvika pa97.5% pamusoro pesimba rinoshandiswa kuita kupisa kunobatsira. simba rekuchengetedza 15% -30% zvichienzaniswa neSCR induction heat muchina.
Zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvakachena, zvisina kusvibisa maitiro ayo anozobatsira kuchengetedza nharaunda, anovandudza mamiriro ekushanda evashandi vako nekubvisa utsi, kupisa kwemarara, kuburitsa kunotyisa uye ruzha rukuru.
Kushanda uye kuisa zviri nyore uye zvakachengeteka
Inogona kutsiva tsika dzechinyakare dzekudziya.
Kugadzira tsvimbo, kuomesa tsvimbo.
Kupisa kurapwa kweshaft, giya, pini, nezvimwe.
Simbi waya uye pombi annealing